Monday 23rd of October 2017, 7:08:56 pm
सहमतिमै बनाएको आफ्नै यौन भिडियो बाहिरियो, अदालतले जेल पठाएपछि झनै तनाव
Saturday 23rd of September 2017, 02:02 PM
श्रीमान् श्रीमती दुवैको सहमतिमा बनाइएको आफ्नै यौन भिडियो बाहिरिएपछि तनाबमा परेको जोडीलाई फेरि अर्को तनाब थपिएको छ । उनीहरु दुवैलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । प्रहरीले आफैंले भिडियो लिक गरेर भाइरल बनाएको आरोप लगाएको छ । अदालतले श्रीमानलाई १ दिनको रिमाण्डमा राखेको छ । श्रीमतीलाई न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ । भर्खरै प्रेम विवाह गरेका श्रीमान्–श्रीमतीले दुवैको सहमतिमै आफ्नो यौन सम्बन्धको भिडियो बनाएका थिए । आफूहरु २ जनाबीच मात्र सीमित रहनेगरी...
दिनभर आमा र साँझ परेपछि छोरीलाई यौन प्यास मेटाएर काठमाण्डौमा महल बनाएपछि …
Friday 22nd of September 2017, 10:29 AM
काठमाडौ। उनको रवाफ देखेर टोल छिमेकका मान्छे चकित छन्– उनी अर्थात कलियुगका कृष्ण ३७ बर्षका राजकुमार केसी । पढन नसकेर विदेश भासिएका उनले काठमाडौको थानकोटमा साढे तीन तले घर बनाएका छन । न उनको सरकारी जागिर छ, न कुनै पेसा व्यबसाय, तरपनि केसीको जीवन शैली देखेर उनलाई चिन्नेहरु चकित छन । तीन बर्ष कुवेतमा घरासयी कामदार काम गरेर फर्कीएका केसीको प्रगति देखेर गाँउका अन्यपनि आश्चर्यमा परेका छन । उनको पुर्ख्यौली घर भने धादिङ हो ।‘यस्ले कसरी घर बनायो भनेर...
किन पाल्छन् युवतीहरुले काखी र योनीमा रौँ ? अचम्म को रहस्य त यस्तो पो रहेछ त !!
Friday 22nd of September 2017, 10:22 AM
काठमाडौँ । काखी तथा गुप्तांगका रौँ सफाचट् पार्नका लागि विभिन्न खाले सौन्दर्य प्रशाधनका विधिहरु तर्फ आधुनिक युवतीहरु आकषिर्त हुन्छन् । उल्लेखित अंगका रौँ मात्र होइन आँखिभौँ तथा सरीरका अन्य भागमा पलाएका रौँ समेत उखेलेर वा खौरेर सुन्दर देखिने लालसा युवतीहरुमा हुन्छ र यसका लागि धेरै खर्च समेत गर्न पछि पर्दैनन् । तर दक्षिण कोरियाली युवतीहरुमा भने गुप्तांगका रौँ पाल्ने प्रचलन फस्टाएको मात्र छैन गुप्तांग क्षेत्रमा रौँ प्रत्यारोपण गर्ने चलन पनि बढेको...
अचम्म को बिज्ञापन ‘नग्नअवस्था मा काम गर्ने महिला कामदार चाहियो, घण्टाको ६ हजार तलब
Thursday 21st of September 2017, 03:07 PM
लण्डनको ‘नेचुरिष्ट क्लिनर्स’ नामक कम्पनीले नग्न भएर घर सफा गर्ने महिला कर्मचारीको खोजी गरेको छ । नीजि घर सफा गर्नका लागि ती महिला कामदारले चप्पल र सफा गर्ने पञ्जावाहेक अरु केही लगाउन नपाउने विज्ञापनमा उल्लेख छ । यसो गरेबापत ती कामदारले घण्टाको ५७ डलर (रु ६ हजारभन्दा बढी) पाउने छन् । महिला जुनसुकै उमेर समूहको भएपनि हुने तथा शरिरको आकारमा समेत कुनै मापदण्ड नभएकोसमेत विज्ञापनमा भनिएको छ । ‘हामी महिला नेचुरिष्ट क्लिनर्सको खोजीमा छौं, जसले नग्न...
यसरी हुन्छ प्रत्येक वर्ष कण्डम प्रतियोगिता
Wednesday 20th of September 2017, 03:43 PM
एजेन्सी सुन्दरी प्रतियोगिता पनि कस्ता कस्ता रु हुँदा हुँदा कण्डम सुन्दरी प्रतियोगिता पनि हुन थालेछ । थाइल्याण्डमा हरेक वर्ष मिस कण्डम प्रतियोगिताको आयोजना हुन्छ । यो प्रतियोगिता जति रोचक छ, उति विवादित पनि छ । कण्डम सुन्दरी प्रतियोगितामा के गर्छन् त सुन्दरीहरुले रु वास्तवमा त्यहाँ सुन्दरीहरुले बेलुन जस्तै गरेर कण्डम फुलाउँछन् । कण्डम फुलाउने प्रतियोगिता नै हुन्छ ।प्रतियोगिताको उद्देश्य थाइल्याण्डमा सुरक्षित सेक्ससँगै यौन संक्रामक रोगप्रति...
यी हुन् खेत जोतेर गर्लफ्रेन्डलाई प्रपोज गर्ने व्यक्ति
Tuesday 19th of September 2017, 12:39 PM
कुनै प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई बिहेका लागि कसरी प्रपोज गर्ला रु सहजै उत्तर आउँछ, घुँडाले टेकेर गुलाफको फूल दिएर, प्रेमपूर्वक कार्डमा लेखेर वा कुनै रेष्टुरेन्टमा क्यान्डिल लाइट डिनर सँगसँगै । कुनै मानिसले खेत जोतेर पनि आफ्नी प्रेमिकालाई प्रपोज गर्दा रहेछन् भन्ने सुन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, यस्तै अपत्यारिलो घटना बाहिर आएको छ । बेलायतमा यस्तो घटना घटेको हो । बेलायतको डेभोनमा बस्ने एक पुरुषले आफ्नी प्रेमिकालाई बिहेको प्रस्ताव...
श्रीमान बाहिर गएकाे बेला मेरै सुरक्षाकर्मीले काम चलाउँछु…
Tuesday 19th of September 2017, 11:58 AM
प्रेम र यौन बिल्कुलै भिन्न लाग्छन्, उस्ता उस्तै कहिल्यै लागेनन् मलाई । हो, प्रेम र यौन दुवै मानवजीवनमा अपरिहार्य छन् । यी दुवै बिना संसार चल्दैन । यौन बिनाको प्रेममा मानिसहरु कतिको सन्तुष्ट हुन्छन् कुन्नी, तर प्रेम बिनाको यौन भने निकै पीडादायक हुने । प्रेम बिनाको यौन त एक किसिमको बलात्कार नै हो जस्तो लाग्छ । तैपनि कतिपयले यौनलाई नै प्रेम भन्ने गर्छन् । विवाहले यौनलाई वैधानिक बनाइदिने गर्छ, चाहे त्यहाँ प्रेम होस् या नहोस् । त्यसैले त अधिकांश महिलाहरु...
चोरी भएको पर्स कुरियर गरिदिएपछि
Tuesday 19th of September 2017, 10:57 AM
असोज , एजेन्सी – पर्समा आमाको फोटो देखे पछि एक चोरको मन पग्लियो र चोरेले पर्सलाई कुरियर गरेर पर्सको मालिकलाई फिर्ता गरे । हुनतः चोरले त्यहाँ भएको १२०० रुपैया फर्काएनन् । त्यो बाएक उसले पर्समा भएको सबै आवश्यक कुराहरु पैनकार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स एव आधारकार्ड सहित अन्य सामान मध्य प्रदेशको होशंगाबाद स्थित अमर चोक निवासी मोहम्मद असलमलाई फिर्ता गरिदिए । पर्स पाएपछि असलमले भने कि २५ जुलाईमा उनी आफ्नो पत्नीको स्वास्थ्य चेक गराउनका लागि फरीदाबाद गएका थिए...
आमा छोरा एकै स्कुलमा पढ्दै
Tuesday 19th of September 2017, 10:43 AM
म्याग्दी: सदरमुकामस्थित प्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा ९ कक्षामा अध्ययनरत भूमिका परियार बल्ल १८ वर्षकी भइन् । उनको तीन वर्षीय छोरा रिदम पनि सँगै छन् । आमा ९ कक्षामा पढछिन् भने छोरा रिदम नर्सरीमा । बिहान १० नबज्दै र दिउँसो ४ बजेपछि दुईवटा झोला दुईपट्टि, पिठ्युँमा छोरा बोकेर स्कुल आउनु र डेरामा फर्कनु उनको दैनिकी हो । साबिक मराङ गाविसस्थित जनविकास माविमा ८ कक्षा पढदै गर्दा १४ वर्षको उमेरमा उनको परिवारले पल्लो गाउँ साबिक रुम गाविस–२ खबाङका २८ वर्षे किरण...